Ahoana ny hamantarana ny asidra amino
Ny asidra amino dia manan-danja amin'ny biôlôjia, biochemika ary ny fitsaboana. Mianara momba ny akora simika amin'ny asidra amino, ny asany, ny fifehezana ary ny toetra:
Ny asidra amine dia karazana asidika voajanahary izay ahitana karbaona fonosana (-COOH) sy vondrona amine (NH 2 ) ary koa ny rojom-pejy (voatondro ho R) izay voafaritra manokana amin'ny asidra amino tsirairay.
Ny asidra amino dia heverina fa ny tranoben'ny polypeptides sy proteinina . Ireo singa hita amin'ny asidra amine rehetra dia karbaona, hydrogène, oksizenina, ary nitroka. Ny asidra amino dia mety misy singa hafa eo amin'ny andaniny roa.
Ny fanoratana an-tsoratra ho an'ny asidra amino dia mety ho litera telo-taratasy na taratasy tokana. Ohatra, valine dia azo aseho amin'ny V na val; Histidine dia H na ny azy.
Ny asidra amino dia mety miasa ho an'ny tenany manokana, fa matetika no mihetsika toy ny monomers mba hamorona molekiola lehibe kokoa. Ny fifindrana asidra amine vitsivitsy dia miteraka peptides. Misy karazana amino asine maro antsoina hoe polypeptide. Mety ho proteinina ny polypeptides.
Ny dingan'ny famokarana proteinina mifototra amin'ny modely RNA dia antsoina hoe fandikan-teny . Ny fandikan-teny dia mitranga ao amin'ny sela ribozôma. Misy asidra amine 22 voakasika amin'ny famokarana proteinina. Ireo asidra amino ireo dia heverina ho proteinogenic. Ankoatra ireo proteinina amino proteinina, dia misy asidra amino izay tsy hita amin'ny proteinina.
Ohatra iray ny asidra gamma-aminobutyric neurotransmitter. Amin'ny ankapobeny, ny asine amino tsy voaaro proteinina dia miasa ao amin'ny metabolisma asidra amine.
Ny fandikana ny code genetique dia misy asidra 20 amino, izay antsoina hoe asino amino kanônika na aserônôma amina fototra. Ho an'ny asidra amino tsirairay dia andiam-pandrefesana mRNA telo no mihetsika toy ny codon mandritra ny fandikana ( ny code genetique ).
Ny asidra amine hafa hita ao amin'ny proteinina dia pyrrolysine sy selenocysteine. Ireo asidra amino roa ireo dia voatokana manokana, matetika amin'ny codon mRNA izay miasa ho toy ny codon stop.
Fahadisoana mahazatra: asid ammino
Ohatra: lysine, glycine, tryptophan
Satria ampiasaina hananganana proteinina, ny ankamaroan'ny vatan'olombelona dia misy asidra amino. Ny ambiny dia faharoa amin'ny rano ihany. Ny asidra amino dia ampiasaina hananganana molekiola isan-karazany ary ampiasaina amin'ny fifindran'ny neurotransmitter sy lipid.
Ny asidra amino dia afaka manao chiriraly, izay mety ho eo amin'ny andaniny ny fifandraisana CC. Ao amin'ny tontolo voajanahary, ny ankamaroan'ny amino asidra dia ny L- isomers . Misy ohatra vitsivitsy amin'ny D-isomers. Ny ohatra iray dia ny gramicidine polypeptide, izay mifangaro miendrika D- sy L-isomers.
Lahateny iray isaky ny telo
Ny asidra amina am-bavaka matetika sy tsapa amin'ny biochemistry dia:
Aparagine, Asn, N
Ny toetra amino asidra
Ny toetra mampiavaka ny asidra amino dia miankina amin'ny firafitry ny ran'ny pejy misy azy. Ampiasaina ny fandefasana taratasy tokana:
Polar na Hydrophilic: N, Q, S, T, K, R, H, D, E
Non-Polar na Hydrophobic: A, V, L, I, P, Y, F, M, C
Misy solifara: C, M
Fiompiana anaty rano: C, W, N, Q, S, T, Y, K, R, H, D, E
Aromatika: F, W, Y (H ihany koa, saingy tsy mampiseho UV be loatra)
Aliphatika: G, A, V, L, I, P
Mamolavola fialana an-jambany: C
Acidique (miorina tsara amin'ny pH neutral): D, E
Basic (Tsy voavaly amin'ny pH neutral: K, R
Ny asidra amino dia fikambanana organika izay manana karbaona carboxyl, vondrona amino, ary ravin-damba mifamatotra amin'ny atomika karbôna.
Ny asidra amino dia ampiasaina ho alohan'ny molekiola hafa ao amin'ny vatana. Ny fifandraisana amina asidra dia mamorona polipeptides. Ny polypeptides dia azo ovaina sy mifamatotra amin'ny proteinina.
Ny code genetique dia fototra ho an'ny proteinina vita ao anatin'ny sela. Ny DNA dia adika amin'ny RNA. Tranontany telo (fitambarana adenine, uracil, guanine, ary cytosine) ho an'ny asidra amino. Misy fitsipika mihoatra ny iray amin'ny ankamaroan'ny amino asidra.
Ny asidra amino dia natao ao amin'ny ribosomes amin'ny sela eukaryotic.
Mety misy asymine amino sasany tsy mety ataon'ny organism. Ireo "essential" amino asidra dia tsy maintsy manatrika ny sakafo ara-tsakafo.
Ankoatra ny fanaovana asid amino avy amin'ny code genetika sy ny fahazoana azy ireo avy amin'ny sakafo, metabolika hafa dia mamadika molekiola ho lasa amino asidra.
Orbital - Definitions in Chemistry
Famaritana mazava tsara
Inona no atao hoe polymère?
Famaritana ny cellule electrochemique
Famaritana sy ohatra ho an'ny Hypertonic
Famaritana ny atao hoe neutralisation
Inona ny ohatra sasany amin'ny polymera?
Ny Spectrometry Mass - Ny atao hoe sy ny asany
Famaritana sy Ohatra ho an'ny famaritana
Diagnostic Vibration Wheel
Anjely ara-baiboly: Nahita serafima tany an-danitra i Isaia Nanompo an'Andriamanitra
Ahoana ny fomba hitazonana fankalazana ny mpanompo sampy ho an'ny zanakao
Tsy maintsy mamaky ho an'ireo mpianatra any amin'ny oniversite
Nanorina ny Piramidan'i Ejipta ve ny Isiraelita?
Susan Atkins no Sadie Mae Glutz
Bethel College (Kansas) GPA, SAT sy ACT Data
Misaotra an'i David
Ny Torolalan'i Matt Biolos ho an'ny Tranom-bakoky ny Tafika tsirairay.
Afaka misotro rano be ve ianao?
Inona avy ny Cost Cost?
Ny mosary 1899-1900 any Inde
Anarana amin'ny teny hebreo (LP)
Fomba hanamboarana ny fahasimbana amin'ny kayak sy ny kanety plastika
Ny Saint Germans maro alemana
Avy aiza ny fiteny?
Famaritana Phatic Communication sy Ohatra